DAAWO:Madaxweyne Farmaajo oo ka farxiyey ardayda P/land & Denni oo la faray in uu dhagaysto bulshadiisa
February 14, 2020 Mahad Jama 3
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waraysi siiyey Universal TV ayaa ka hadlay khilaafka siyaasadeed iyo mida waxbarasho ee u dhaxeeya dowladda federaalka iyo Puntland.
Madaxweyne Farmaajo oo si kooban uga hadlay waxyaabaha ay isku hayaan labada dhinac ayaa sheegay in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni uu marar kala duwan Farmaajo u fidiyey martiqaad si ay u wada tashtaan labada madaxweyne xaalada dalka iyo masiirka Soomaaliya, hasa yeeshee Saciid Cabdullaahi Denni uu safar dhanka cirka ah ku dulmaray magaalada Muqdisho isagoona dhagaha ka furaystay dhambaalka uga yimid madaxweyne Farmaajo.
Waxa uu sheegay in weli Saciid Denni uu ku jiro safaro dhanka dalka dibediisa ah, isagoona Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu rajo wacan ka muujiyey suurta galnimada kulan dhex mara isaga iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni.
Madaxweyne Farmaajo ayaa bulshada reer Puntland ku amaanay doorkii ay ka ciyaariyeen dhismaha dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana uu sheegay in muddo labo mar ah uu tagay intii hayey xilka madaxtinimada Puntland madaxweyne Denni deegaanada Puntland isla markaasna si diiran loogu soo dhoweeyey.
Madaxweyne Denni ayuu sheegay in layma maar maan ay tahay in uu dhagaysto rabitaanka bulshada reer Puntland si dalka uu yeesho amni iyo horumar loogana wada shaqeeyo dhinacyo badan iyada oo la horumarinayo wada shaqaynta madaxda dowladda dhexe iyo dowladd goboleedyada kale ee ka jira dalka.
Dhanka waxbarashada iyo khilaafaadkeeda ayuu ka hadlay madaxweyne Farmaajo, waxaana uu nasiib daro ku tilmaamay muranka dhanka waxbarashada ah ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland, isagoona taas badalkeeda sheegay in lagama maar maan ay tahay in la tayeeyo aqoonta caruurta Soomaaliyeed lana horumariyo.
“Caruurta Puntland waa caruurteenii weeye waa caruurtaydii weeye Denni caruurtaa Soomaaliya waa caruurtiisii weeye, wasiirka waxbarashada laftigiisa isagaa masuul ah hawshan loo xil saaray inuu arko wada shaqaynta dowladd goboleedka Puntland inay muhiim tahay oo si kasta oo aan u hanan karno wada shaqeyntooda aan u samayno”. Sidaasi waxaa yidhi madaxweyne Farmaajo.
Wasiirka waxbarashada Soomaaliya ayuu sheegay in muddadii uu xilka hayey uu Puntland kala shaqeeyey dhanka waxbarashada isla markaasna bartilmaameedku uu yahay kor u qaadida tayada waxbarashada dalka.
Beer laxawsiga iyo cabaad weerka hajoojiyo. Puntland waay tashanaysaa saan rajeynayo.
Tuug tuug dhalay, Xamar in uu ku xiro ayuu rabaa, ninkaan awood anu laheyn buu isa siiyaa.
Salaam: Diini waa madaxweynaha PL. Farmaajo isagu ma uu dhakeysana shacabka Soomaaliyeed mise wuxuu dhageysa Fahad iyo Abey.
Meel wanaagsan buu Diini ku wadaa PL waana aad aragta sida uu wax uu wado mudaada yar oo uu joogo.
Farmaajo waa fulay isagana soo diray Godax oo yiri ii cay shacabka, ardeyda iyo Odeyasha PL.
Idingu danta Pl in aad ka shaqeysa soo idinma fiicna.